MAANTA OO KALE: 10 xiddig oo Chelsea oo Champions League ka reebay Barcelona, Lewandowski oo afar gool ugu shubay Real Madrid & Goolkii uu Salah ka dhaliyey Roma – Gool FM
(Yurub) 24 Abriil 2019. Aqristayaasheenna shafarta leh ku soo dhowaada xubintii maanta oo kale maxaa ka dhacay kubadda cagta, waxaana maanta ku soo qaadanaynaa Chelsea oo toban ciyaaryahan ku dheeleysay oo Champions League ka reebtay Chelsea, Lewandowski oo afar gool ugu shubay Real Madrid, goolkii uu Mohamed Salah ka dhaliyey kooxda Roma & Dhalashada Costacurta oo maanta ku beegan.
>- Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa iyadoo kaarka cas laga qaatay waxa ay maanta oo kale todoba sano ka hor Barcelona garoonkeeda Camp Nou kaga reebtay tartanka Champions League.
Maanta oo kale 24 bishii April sanadkii 2012-kii, kooxda Chelsea ayaa gaartay Final-ka tartanka Champions League kaddib markii ay Barcelona ku reebtay afar dhammaadka.
Kulankii lugta labaad oo ka dhacay garoonka Camp Nou, kooxda martida loo ahaa ayaa goolka bilowday waxaana 35’daqiiqo u dhaliyey Busquets, waxaana Blues ay sii wareetay markii uu kaarka cas ka qaatay Terry 37’daqiiqo.
Barca ayaa goolka labaad ee kula la timid waxaana u dhaliyey 43’daqiiqo ee qeybtii hore Iniesta, laakiin Chelsea ayaa hal gool keensatay dhammaadkii qeybtii hore ee dheesha waxaana u dhaliyey xiddigeedii reer Brazil ee Ramires.
Lionel Messi ayaa qeybtii labaad ee ciyaarta gool ku laad ka khasaariyey Barcelona 49’daqiiqo, laakiin goolka wadnaha jaray kooxda reer Spain waxaa ka dhaliyey Fernando Torres dhammaadkii dheesha, taasoo ka dhigan in Chelsea ay cel-celis ahaan labadii lugood ku soo baxday oo ay final-ka ku gaartay goolal gaaraya 2-3, Barca ayaana sidaas Koobka horyaallada Yurub ku macsalaamaysay sanadkaas.
>- Maanta oo kale 24 bishii April sanadkii 2013-kii, Lewandowski ayaa ka yaabsaday kooxda Real Madrid markii uu ugu shubay afar gool.
Kulankan oo ku dhammaaday 4-1 kana tirsanaa afar dhammaadka Champions League ayuu Lewandowski oo markaas ka mid ahaa kooxda Dortmund uu afarta goolba ka dhaliyey Los Blancos.
Weeraryahanka reer Poland ayaana ku soo caan baxay kulankaas, waxaana ciyaarta ay dadka badinkiis u bixiyeen afar gool dhaliyoow, goolka qura oo ay Real Madrid la timid kulankan waxaa u dhaliyey Ronaldo.
>- Hal sano ka hor maanta oo kale waxa ay ku beegan tahay markii Mohamed Salah uu gool ka dhaliyey kooxdiisii hore ee AS Roma.
Weeraryahanka kooxda Liverpool oo Mohamed Salah ayaa gool ka dhaliyey sanadkii hore maanta oo kale kooxdii laga soo iibsaday ee AS Roma.
Dhaliyaha reer Masar ayaana markii uu goolkaas ka dhaliyey naadiga reer Talyaani u muujiyey xushmad isagoo aan ku hor dabaal-degin taageerayaashiisii hore.
>- Dhinaca kale maanta waxa ay ku beegan tahay dhalashada ciyaaryahankii weynaa ee kooxda AC Milan, Alessandro Costacurta.
Costacurta oo maanta 53-sano jirsaday ayaana ku guuleystay 7 Serie A, 5 Champions League, 5 Supercoppa Italiana, 4 UEFA Super Cup, 2 Intercontinental Cup iyo 1 Coppa Italia.
Waxa uu noqday Costacurta ciyaaryahankii ugu da’da weynaa taariikhda ee gool ka dhaliya horyaalka Serie A, waxaana uu horyaalka Talyaaniga gool ka dhaliyey isagoo jira 41 sanadood iyo 25 maalmood.
SHAX isku dhaf ah oo laga sameeyay Manchester United vs Manchester City ka hor kulankooda caawa… (Red Devils oo la qadiyay!)
Kooxda Barcelona oo caawa ku guuleysanaysa horyaalka La Ligaha Spain haddii....